Waaxda dalxiiska ee Bariga Afrika oo khasaartay dhaqaale badan | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Waaxda dalxiiska ee Bariga Afrika oo khasaartay dhaqaale badan
Waaxda dalxiiska ee Bariga Afrika oo khasaartay dhaqaale badan
Qeybta dalxiiska ee Bariga Afrika ayaa lumisay in ka badan $ 4.8 bilyan iyo 2 milyan oo shaqooyin ah sannadka 2020 iyada oo ay sababeen xannibaadaha COVID-19, sida lagu sheegay warbixin la sii daayay Arbacadii.
Waaxda dalxiiska ayaa ku biirisa qiyaastii 10% Jaaliyadda Bariga Afrika (East African Community) dhinaca wax-soosaarka guud ee wadammada (GDP) waxayna u dhigantaa 17% dakhliga dhoofinta iyo qiyaastii 7% xagga shaqooyinka, marka loo eego xogta rasmiga ah.
Warbixinta Golaha Ganacsiga Bariga Afrika (East African Business Council), oo ah urur ganacsiyo gaar ah ku leh gobolka, ayaa muujisay in 4.2 milyan oo dalxiisayaal ajnabi ah aysan awoodin inay u safraan goobaha dalxiiska ee Bariga Afrika.
“Waxaa la qiyaasayaa in shaqooyinka dalxiiska ee gobolka ay hoos u dhaceen qiyaastii 4.1 milyan oo ay gaareen 2.2 milyan,” ayuu yiri madaxa fulinta EABC John Bosco Kalisa.
Ururka EAC ayaa bishii la soo dhaafay ansixiyay qorshe dib-u-soo-kabasho COVID-19 oo loogu talagalay dalxiiska kaas oo doonaya in dib loo soo nooleeyo waaxda iyada oo la hubinayo in lixda dal ee xubnaha ka ah-Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania, Burundi iyo Koonfurta Suudaan-ay qaataan hab wadajir ah oo isku duuban dhanka soo kabashada dalxiiska.
Previous articleCongress-ka oo Biden ku cadaadinaya in suxufiyiin laga soo qaado Afghanistan
Next articleSoomaaliya oo ka codeysay Shirweynaha Midowga Boostada Adduunka